Ukulawulwa komzali ku-Kindle wakho | Onke ama-eReaders
Okokufundisa: vula izilawuli zabazali ku-Kindle yakho
Idivayisi efana ne- I-Amazon Kindle ungaba umlingani wakho omkhulu uma unengane njengethuluzi elihle lokuzama ukuqala bathande ukufunda futhi bajabulele izincwadi ezahlukahlukene ezifanele iminyaka yabo, okuzokubiza imali encane kakhulu. Vele, qaphela kakhulu ngoba uma ungasisingathi isimo ngendlela efanele kungakudumaza ngaphezu kokukodwa.
Futhi yilokho Uhlobo olusezandleni zengane encane lungaba yingozi ngoba, ngokwesibonelo, ungathenga izincwadi bese ubakhokhisa ku-akhawunti oyihlobanise, nezindleko ezizolandela ngama-euro nangesikhala kudivayisi yakho. Ukwenza lokhu namuhla sizothola ngesifundo esilula ukuthi kanjani yenza kusebenze ukulawula kwabazali kudivayisi yakho, ithuluzi, kwesinye isikhathi liwusizo impela.
Okokuqala, ukuze sikwazi ukusebenzisa lesi sifundo, kumele ngabe sifake ifayela le- isibuyekezo se-firmware 4.10, uma kungenjalo ngeke sikwazi ukusebenzisa leli thuluzi elithakazelisayo.
Izinyathelo okufanele zilandelwe ukwenza kusebenze inketho yokulawula kwabazali kudivayisi yakho ye-Kindle:
Esikrinini sasekhaya cindezela inkinobho "Imenyu". Lapho sekuvele uhlu lwezinketho khetha eyodwa ebonakala njenge- «Izilungiselelo». Emizuzwini embalwa sizobona zonke izinketho ezitholakalayo
Uma unesibuyekezo esifanele se-firmware, inketho kufanele ivele kusikrini sesithathu "Ukulawulwa kwabazali"Ukuqala ukumisa le nketho ngakwesokudla kufanele ukwazi ukusebenzisa igama elithi "Setha" elizosivumela ukuthi silungiselele izinketho zalokhu kulungiselelwa komzali
Lapho nje ukulawulwa kwabazali sekuqalile ukusebenza, singakhetha ukuthi yiziphi izinhlelo esizovimba. Singakhawulela ukusetshenziswa kwesiphequluli sewebhu, i-Kindle Store, noma okuqukethwe okugcinwe kungobo yomlando.
Ngaphandle kokungabaza sibhekene ne- inqubo elula impela kepha edingeka kakhulu uma sishiya uMusa wethu ezandleni zentsha noma izingane ezincane. Kwesinye isikhathi kulula kakhulu ukuthola okuqukethwe okungafuneki kwewebhu noma ukuthenga izincwadi, okungaba wumonakalo omkhulu emaphaketheni ethu ashaywayo.
Imininingwane engaphezulu - I-Kindle Paperwhite, i-e-reader ebuyela emuva e-Amazon
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » izinkampani » Amazon Kindle » Okokufundisa: vula izilawuli zabazali ku-Kindle yakho
Izimpawu ezingama-24: iphrojekthi yaseSpain emhlabeni wama-ebook
i-miBuk Life 2, i-eReader enamandla ngaphandle kwempumelelo enkulu